Tafintohina Tamin’ny Lalànan’ny Iraniana Momba Ny Sarondoha Ireo Ekipa Vehivavin’ny Air France · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2016 8:42 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, Ελληνικά, 日本語, English
Nohizingizinin'ny solontenan'ny fikambanana, Françoise Redolfi, tao amin'ny Onjampeo Frantsay RFI fa tokony hanana zo handà tsy hiasa amin'ny zotra Paris-Tehran ny vehivavy :
Ho firaisankina amin'ireo vehivavy mpikarakara mpandeha ao amin'ny Air France sy ireo vehivavy any Iràna, dia nanao fanentanana mangataka ireo vehivavy vahiny mitsidika an'i Iràna mba hanàla ny saron'ny lohany ary hizara ny sary momba izany hetsika izany ny My Stealthy Freedom (Ny fahafahako miserana). Ary dia nirongatra ny fandraisana anjara.
Tsy nampaninona ireo mpikarakara mpandeha tao amin'ny #AirFrance ny sarondoha rehefa niato tany #Iràna tamin'ny 2004. Inona no niova ?
Tsy mivonona ny hanao sarondoha sy pataloha ireo mpikarakara mpandeha ao amin'ny #AirFrance. Angamba TSY haharitra ela ny zotra mivantana mankany #Iran.
Sariitatra nataon'i #ShahrokhHaydari: ” Hejab ho an'ny Air France.” Miatrika ny politikan'ny fiakanjoana any Iràna ireo mpandray vahinin'ny orinasa.
Tsy isalasalàna fa lasan'ny Minisitra Frantsay misahana ny Fianakaviana sy ny zon'ny Vehivavy Laurence Rossignol, ny loka tsy firaharahiana kolontsaina. Rehefa nanontaniana azy ny momba ny vehivavy Silamo izay mifidy ny hanao hijab, dia izao no valinteniny ” Marina, misy ny vehivavy izay mifidy izany…. misy ihany koa ireo amerikana mainty izay manaiky ny fanandevozana.”
Ny soratra nataon'i Christina Cauterucci ao amin'ny Slate :
Tsara ny manamarika, na izany aza, fa tsy ny fitondràna hijab fotsiny ihany no notoherin'ny ekipan'ny Air France, fa ny fangatahana ny fanovàna ny fitondràntenan-dry zareo ihany koa. Nosoratan'ny mpikambana iray ao amin'ny Air France amin'ny hafatra nalefa tao amin'ny My Stealthy Freedom :
Notantaraiko tao amin'ny lahatsoratra nosoratako ho an'ny Tehran Bureau ny fomba niarovan'ny zaobaviko ahy tamin'ny mpanaramaso ny fomba Iraniana :